Kidnapping: votsotra i Malik Karmaly, mbola voatana ilay Tonizianina | NewsMada
Kidnapping: votsotra i Malik Karmaly, mbola voatana ilay Tonizianina
Ny eo votsotra, ny sasany mbola tsy hita… Mirongatra ny fakana an-keriny. Mandry tsy lavo loha ry zareo Karana. Tsy misy mangirana ny momba ny mpanao kidnapping eto an-dRenivohitra.
Votsotra, ny alahady hariva teo, ilay Karana Malik Karmaly, nalain’ny jiolahy an-keriny teny Soavina ny asabotsy antoandro teo. Mbola tsy hita popoka kosa ilay teratany tonizianina, i Sofiane Omrani. Mbola any am-pelatanan’ireo jiolahy ity farany. Araka ny filazan’ny mpitandro filaminana, tsy nahazo vaovao momba ireo fakana an-keriny ireo mihitsy izy ireo. Tsy nisy ny fitoriana nipetraka eny anivon’izy ireo. Milaza ho tsy mahalala ny fomba nahavotsotra ilay Karana io ihany koa izy ireo. Anisan’ny olana amin’ny fikarohana ireo mpaka an-keriny ny tsy fanomezam-baovao avy amin’ny fianakavian’ireo Karana.
Nilaza mihitsy ny kolonely Théodule, tompon’andraikitra voalohany amin’ny zandarimaria any Toamasina, fa ny fanomezan’ny Karana vola ireo jiolahy no mamatsy azy ireo, ary mahatonga fakana an-keriny hisy hatrany. Efa nisy ny olona tratra tany Toamasina, ny herinandro teo, nitranga indray ireto ny taty Antananarivo. Samy hafa mihitsy ireo mpaka an-keriny any Toamasina sy eto Antananarivo?
Nisy mpiambina sivily efatra
Araka ny fantatra avy amin’ny zandary, nisy ny feo nandeha fa nisy zandary efatra mpiambina ilay Karana io. Nilaza kosa anefa ny avy amin’ny zandarimaria fa tsy zandary ireo fa mpiambina sivily. Efa misy ny fanadihadiana misokatra manodidina izany. Nisy ihany koa ny filazana fa nampiasa fiara roa ireo jiolahy nandritra ny fakana an-keriny ary efa fantapatatra ny fiara nampiasain’ireo.
Nandritra ny filankevitry ny minisitra farany teo, nilaza fa nanova paik’ady ny fitondrana amin’ny ady amin’ny fakana an-keriny. Miandry izay paik’ady izay ny rehetra satria hita fa tena mirongatra tanteraka izany tamin’ity taona ity. Ny eo votsotra, ny hafa mbola tsy hita, asa na iza indray ny Karana hisy haka an-keriny manaraka eo.